काठमाडौं उपत्यकामा आजवाट केही खुकुलो निशेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन ? - सुनाखरी न्युज
काठमाडौं उपत्यकामा आजवाट केही खुकुलो निशेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन ?
Posted on: June 4, 2021 - 7:16 am
काठमाडौं उपत्यकामा केही खुकुलो बनाएर १० दिन थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू भएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा बिहान ९ बजेसम्म किराना लगायत केही पसल खुला गर्न पाइने छ ।
जेठ १४ गतेदेखि किराना पसलहरु समेत बन्द गरेर एक साताका लागि कडा निषेधाज्ञा गरिएकोमा आजदेखि भने केही सेवा चल्न दिनेगरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।